ဒေါ်လာစားတိုင်း ဖတ်သင့်ပါသဖြင့် Share လိုက်ပါတယ်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဒေါ်လာစားတိုင်း ဖတ်သင့်ပါသဖြင့် Share လိုက်ပါတယ်….
ဒေါ်လာစားတိုင်း ဖတ်သင့်ပါသဖြင့် Share လိုက်ပါတယ်….
Posted by bigchef on Aug 15, 2011 in Copy/Paste | 11 comments
ဖြစ်ချင်လဲ ဖြစ် မယ်။ ထင်မြင်ချက်လေးတွေ ကိုဝိုင်း မန်.ပေး ကြ ပါအုံး။ရွာ ထဲ မှာ Dollar စားတွေ အများ သား ဆိုတော့
ဒေါ်လာစားတိုင်း ဖတ်သင့်ပါသဖြင့် Share လိုက်ပါတယ်…..။
အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေဈေးကျဆင်းပြီး မြန်မာငွေ ပြန်လည် ခိုင်မာလာပါမယ်လို့ ကျနော် – ၂၀၁၁- နှစ်ဆန်းပိုင်း ဇန္န၀ါရီလဆန်းပိုင်းက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု အကြောင်းရေးနေရင်း Australia Macquarie Universityမှ စီးပွားရေးပါမောက္ခ Dr. Sean Turnell မှ ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာအလုပ်သမားများ နှစ်စဉ်မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ပို့ ပေးနေသော ငွေကြေးပမာဏ အကြောင်းဆောင်းပါး ပါလာတဲ့အတွက် ကျနော်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခု မြန်မာငွေပြန်လည်ခိုင်မာလာနေတဲ့ ကိစ္စကို ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ န.အ.ဖက သူတို့ လက်ထက် စီးပွားရေး အကောင်းဘက်ကို ပြလာလို့ စီးပွားရေးခိုင်မာလာလို့ ဦးမော့လာလို့ ဆိုပြီး အတည်ပေါက်လိမ်လာပါတယ် ။
ဒီတော့ အခုမြန်မာငွေက ခိုင်မာလာတာ သက်သက်ပါ။ အမေရိကန် ဒေါ်လာဈေး ကျလို့မဟုတ်ပါဘူး။ အမေရိကန် ဒေါ်လာက တချို့နိုင်ငံတွေ (ဥပမာသြစတေးလျနဲ့) ဆိုရင်ကျပါတယ်။ ကျတာက သြစတေးလျက သံယံဇာတအများကြိးထွက်တော့ စီးပွားရေးခိုင်မာလို့ပါ။ အခု ငွေတန်ဖိုး တအိအိကျနေတာက တရုတ်ငွေပါ။ သူငွေက လူသန်း-၁၃၀၀ – ရဲ့ အင်အား။ ကျတာက တအိအိ။ ဒါပေမဲ့ သူက စီးပွားရေးပမာဏက ကြီးလွန်းတော့ ငွေတန်ဖိုး နည်းနည်းလေးကျတာ အင်မတန် ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ အဲဒါက တမှောင့်။ သူငွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အမေရိကန်ငွေက ခိုင်မာတယ်။
ကျနော်တို့ဆီမှာက မူမမှန်တဲ့ ငွေကြေး ကစားထားတာကြောင့် အဲဒီကစားတာကို ရပ်လိုက်ရတာနဲ့ မြန်မာငွေဈေးက အရှိန်အဟုန် ပျင်းပျင်း ထိခိုက်လာတာ။ ဘာမှစီးပွားရေး တက်လာလို့ မဟုတ်ဘူး။ လူမမာနဲ့ ဥပမာပေးပါမယ်။ အခုမြန်မာပြည်မှာ ဆေးခန်း အတော်များများက လူတယောက် သာမန်ဖျားနာရင်ကို STEROIDS / PREDNISOLONE တွေ ပေးတော့တာ။ စတီးရွိုက်ဆေးဆိုတာက သူက ရောဂါကို ကုပေးတာမဟုတ်ဘူး။ ရောဂါလက္ခဏာကို / တနည်း – ဝေဒနာကိုသက်သာအောင် လုပ်ပေးတာ။ ဥပမာထပ်ဆင့်ပေးပါမယ်။ သူက ပဋိဇီဝဆေးလို ရောဂါပိုးကို တိုက်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ အရပ်စကားနဲ့ဆို (ရွှေရင်အေးဆေး) လူတဦးကို ရောဂါပိုးဂါပိုးဝင်လာရင် (ရန်သူပေါ့) လာရင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်က (မြို့ခံတပ်ပေါ့) ပြန်ခုခံတိုက်တယ်။ တနည်း စစ်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့။ စစ်တိုက်ကြ စစ်ဖြစ်ကျတော့ မီးတွေလောင် ဘာဖြစ်ညာဖြစ်တော့ လူမှာ ကိုက်ခဲ မီးလောင်တော့ ကိုယ်တွေပူ ဖျားတယ်ပေါ့။ အဲဒီလိုမြင်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်က ကိုယ်ခံအားကောင်းရင် ရောဂါပိုးကိုနိုင်ပြိး သက်သာလာတယ်။ ကိုယ်ကမနိုင်ရင် ပဋိဇီဝဆေးတွေ အကူယူ တိုက်ရတာက ဆေးကုတာ လုပ်ပေးရပါတယ်။
တခါက ၂၀၀၅- ခုနှစ်ပေါ့။ မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ ကလေး – ၃-နှစ်သားလေး ဖျားတယ်။ ဆေးခန်းပြတယ်။ ငွေသိပ်မတတ်နိုင်တော့ အဖျားကျပြီ ဆိုပြီး ဆေးခန်းဆက် မသွားတော့ စတီးရွိုက် ရုတ်တရက် ပြတ်သွားတယ်။ ကလေးက မျက်လုံးလေးဟောက် မလှုပ်နိုင်တော့ ကလေးဆေးရုံကြီး သွားပြရတယ်။ ဆေးရုံတင်ရတယ်။ ဆေးရုံမှာအားဆေးတွေသွင်း အားပြန်မထူနိုင်ဘူး။ ကျနော်လိုက်ကြည့်တယ်။ ကလေးကို ကိုင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ချွေးစေးတွေနဲ့ အေးစက်နေတာ။ သိလိုက်ပြီ အပြင်ဆေးခန်းက ဆရာဝန်က ပထမနေ့ကတည်းက စတီးရွိုက်ဆေး နဲ့ကုနေတယ်ဆိုတာ။ ဒါ (လုံးဝ မလုပ်ကောင်းတဲ) ကိစ္စ။ ဒါဆရာဝန်တွေ စောင့်ထိန်းရတဲ့ သမားကျင့်ဝတ်ကို ဖေါက်ဖျက်တာ။ ကလေးအထူးကု ဆရာဝန်ကလည်း မိတ်ဆွေဆိုတော့ ကျနော် ဒီလိုထင်ပါတယ် ရှင်းပြလိုက်တယ်။ သူက ကျနော်ထက် လေးတန်းလောက်ငယ်တယ်။ သူကလက်ခံတယ်။ စတီးရွိုက်လေး ပေးလိုက်တာ တနာရီနေတော့ ထထိုင်တော့တာဘဲ။ ဒီလိုဘဲ တခြားသူတွေလဲခနခန ဖြစ်တတ်ကြလို့ ကျနော့်ကိုခေါ်ပါတယ်။ သိတယ်။ စတီးရွိုက်ဝယ်သောက် ညွှန်းလိုက်တယ်။ အိမ်ပြန်တယ်။ မသက်သာရင်ဖုံးဆက်။ ဒီအတိုင်းဘဲ။ နာရီဝက် တနာရီဆို ရေတောင်ပြန်ချိုးလို့။ ပြီးမှ တစတစ ဖြတ်နည်းညွှန်းရတယ်။
ကိုပု post ကိုပြန်ပြီး ၇ှယ်ယာ လုပ်ထားတာပါ…
အရင်တုန်းက မြန်မာကျပ်ငွေမာတာ ကျောက်စိမ်းတုံးတွေ၊ ဓါတ်ငွေ့တွေ ထုတ်ရောင်းလို့ဖြစ်တယ်ထင်ခဲ့တာ အခုကျမှ စဉ်းစားစရာတစ်ခုရတယ်။ တစ်ဒေါ်လာ ၃၀၀ ဟုတ်လား၊ ပျော်စရာကြီး။
” တစ်ဒေါ်လာ ၃၀၀ ဟုတ်လား၊ ပျော်စရာကြီး ”
No, you cannot be happy.
Most Economists said,
If the US$ value is less than 500 Ks ( & keep this momentum )
then, our country will collapse.
1. We cannot make export ( local price is more than foreign price ).
2. Then, every commodity price & service charges will down.
3. Most of the companies will close, because they have lesser income, no profit & cannot afford to pay salary to their employees.
4. Farmer, fisher men & workers will loose their job & more poor.
5. Finally, it will becomearevolution like 8.8.88.
every developed nations have inflation,
they don’t kill this inflation &
just maintain it in certain controlled stage (0to5% ).
In fact, this controlled inflation indirectly push the Economy upward.
It’s necessary evil.
တခါ ကြိုင်ကြိုင်တို့ ပြေးဖို့ပြင်ထားပြီးပြီ။ သူတို့ပိုင်တဲ့ငွေတွေ ကိုလည်း သူတို့ ကိုယ်တိုင်က မြန်မာပြည်ကပြေးဖို့ဘဲ အပီတွက်ထား ပြင်ထားကြတော့ သူတို့ငွေကို ပြည်တွင်းပြန် မရင်းနှီးကြတော့ဘူး။ ဒါကို မျက်တောင်တဆုံးဘဲ ကြည့်တတ်တဲ့ ကြံ့ဖွတ်တွေက မမြင်ကြသေးဘူး။ ချကျွေးတာလေး အငမ်းမရ ဟပ်နေကြတာ။ သူတို့ အဘ ကပြေးဖို့ရယ်ဒီ။ ထစ်ဆိုရင် အမြှီးတောင် မြင်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူး။
If any villager who want to read ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် ဆောင်းပါးများ,
တဒေါ်လာ ၃၀၀ သေဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်။ အဲ့လောက်ဖြစ်လို့ကတော့ သူများဆီမှာ ဒုက္ခမခံတော့ဖူး ပြန်တော့မယ်။ ရွာပြန်ပြီ လယ်အလုပ်ပဲ ပြန်လုပ်တော့မယ်။
မှီရေ- တဒေါ်လာ ၃၀၀ လည်း ရွာပြန်ဖို့ မစဉ်းစားနဲ့ဦး။ ရွာက အခြေအနေလည်း အရင်စုံစမ်းကြည့်ဦး။
ဒေါလာဈေးကျဆင်းတာ မြန်မာငွေမာလာဆိုတာ…စီးပွါးရေးအရကောင်းတယ်လို့မမြင်ပါဘူး..ပြည်ပမှာချွေးနဲစာနဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ကိုင်ပြီး ရလာတဲ့မဆို့မပို့ငွေလေးကို မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ပြန်လည်ပို့ပေးနေရတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားအလုပ်သမားတွေအတွက် တော်တော်လေးထိခိုက်ပါတယ်…သူတို့မှာမြန်မာပြည်ကနေ လာေ၇ာက်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် အေဂျင့်ဖီး ၁၂ သိန်းကနေ သိန်း ၄၀ အထိပေးပြီးလာရပါတယ်(မလေးနဲ့စင်္ကာပူ)။ယနေ့ ရင်းဂစ်ဈေး ၂၄၀ပဲရှိတယ်…စက်ရုံအလုပ်သမားတွေဆိုရင် စားစရိတ်နှုတ်ပီး တစ်လကို Rm.300 လောက်ပဲကျန်တယ်…မြန်မာပြည်ကနေ အိမ်ပေါင်၊လယ်ပေါင်ပြီးလာရတဲ့သူတွေ အကြွေးကိုဘယ်လိုဆပ်မလဲ….
တဒေါ်လာ ၅၀၀ အောက်ဆိုရင် လွန်ခဲ့သော ၈ နှစ် ၇ နှစ်လောက်က ဈေးကို ပြန်ရောက်သွားမှာပေါ့ အဲ့ဒီတုန်းက မှတ်မှတ်ရရ နိုင်ငံခြားစာမေးပွဲတခုကို ဖြေဖို့ စာမေးပွဲကြေးသွင်းဖို့ ဒေါ်လာသွားလဲခဲ့တာ အဲ့ဒီဈေးနဲ့ပဲ….
တရားဝင်နှန်းသတ်မှတ်လဲ နှန်းသေဆိုလျှင် သေချာတာတခုကတော.
မြန်မာပြည်ရဲ.ဘဏ်လုပ်ငန်း စနစ်က အဆင်သင်.ဖြစ်နေပြီလား….
ကျနော်နိုင်ငံခြားစရောက်တဲ့အချိန်မှာ မလေးရင်းဂစ် တစ်ရင်းဂစ်ကို မြန်မာငွေ ၂၈ကျပ်၊၃၀ပဲရှိသေးတယ်၊စင်္ကာပူနဲ့ ၄၅ကျပ်ဝန်းကျင်ပဲ…အဲဒီအချိန် ပါပလစ်ကာ သင်္ဘောချ ယာယီနံပါတ်တစ်စီးကို မြန်မာငွေ ရှစ်သောင်းကနေ တစ်သိန်းဝန်းကျင်ပဲရှိပါသေးတယ်…၁၉၉၀-၁၉၉၁ ၀န်းကျင်ပါ၊ အရေးအခင်းဖြစ်ချိန်မှာ အော်ခဲ့တဲ့ ဆန်တစ်ပြည် နှစ်ကျပ်ခွဲ စိန်လွင့်ခေါင်းကိုခွဲ….ယခု ဆန်တစ်ပြည် နှစ်သောင်းခွဲ ဘယ်သူ့ခေါင်းကိုခွဲမလဲ… အဓိက လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေက ဘာတွေလည်း…ပြည်သူတွေ စားဝတ်နေရေးအစဉ်ပြေအောင်ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…ဒေါ်လာဈေးကျသွားတာ ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေ ပြေလည်သွားတာလား၊…စဉ်းစဉ်းစားစားလည်းလုပ်ကြပါအုံးဗျာ…